Semalt: Ny fomba tsara indrindra hampiato ny fifamoivoizana miafina amin'ny data Google Analytics
Ny fifamoivoizana dia ny tanjon'ny fanentanana webmaster na Internet marketing. Zava-dehibe ny hahitana ny fitohanana ny fifamoivoizana sy ny sari-panavaozana mba hahafantarana hoe iza marina ny mpitsidika. Ohatra, indraindray, ny olona avy amin'ny orinasa toy ny mpiasa dia afaka miditra amin'ny tranokalanao amin'ny tanjona samihafa. Amin'ity tranga ity dia miezaka mamorona fifamoivoizana amin'ny tranonkala sandoka amin'ny Google Analytics izy ireo, izay mety tsy hiverina amin'ny mpanjifa. Amin'ny tranga hafa, ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny adiresy IP mba hametrahana fanafihana spam betsaka izay tsy vitan'ny olana ihany fa mangalatra fanazavana sarobidy toy ny fampahalalana momba ny carte de crédit - wireless home alarm systems.
Ny fahamendrehan'ny tranonkalanao sy ny an'ny mpanjifany dia miankina amin'ny hatsaran'ny fepetra manohitra ny spam ao amin'ny tranokalanao. Zava-dehibe ny mampiasa cookies sy adiresy IP hanaraha-maso ny fifamoivoizana aty amin'ny tranonkalanao. Zava-dehibe koa ny manamboatra sasantsasany amin'ireo sivana hita ao amin'ny Google Analytics. Ny sasany amin'ireny fepetra ireny dia afaka manampy anao hanakana ny sasany amin'ny fanafihana spam-be tsy mety sy tsindraindray hafa mety hitranga.
Max Bell, mpitantana ny Success Suisse amin'ny Semalt , dia manome ny sasany amin'ireo fomba izay ahafahanao manafaka ny tenanao amin'ny data Google Analytics:
Ampiasao adiresy IP
Ny sasany amin'ireo fomba izay ampiasain'ny ordinatera sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny aterineto dia mampiasa sehatra dinamika..Vokatr'izany, ny adiresy IP dia miova mba ahafahan'ny Google Analytics raketam-baovao tsy misy dikany. Ny fampiasana tranonkala IP dia afaka manamboatra tranonkala hahazoana valiny tsara momba ny mpamatsy aterineto. Azonao atao ny mampihatra sivana amin'ity adiresy IP ity ary koa filahin-jotra hafa izay mety ho hita ao amin'ny Google Analytics admin. Ny fitaovana toy ny finday, takelaka, ary ordinatera mandeha amin'ny router router finday dia tsy manana adiresy IP.
Ampiasao ny fampiasana cookies
Ny antonta cookies dia isa be dia be ao amin'ny solosaina ampiasaina hanatsarana ny traikefa an-tserasera. Amin'ny toe-javatra sasany, ny cookies dia matetika no mahatonga ny mpizara ho tompon'andraikitra amin'ny adiresy IP an'ny mpanjifa. Ny tranonkalan'ny fandoavam-bola dia mampiasa ny fampiasana cookies ho fepetra hanodinana ny hosoka amin'ny aterineto. Ny cookies dia mety ho tena zava-dehibe hodinihina rehefa mametraka fepetra manohitra ny spam. Tadidio fa ny fahamendrehan'ny tranokalanao dia miankina amin'ny fahombiazan'ny fepetra fanoherana ny spam. Ny cookies dia afaka manova ny fizotran'ny sivana manokana amin'ny pejy. Ny cookies dia afaka manome ny fampahalalana momba ny tranokalan'ny tranonkala iray dia mahazo fifamoivoizana be.
Ilaina ny manasaraka ny adiresy IP izay mety tsy tianao ho toy ny fifamoivoizana. Soa ihany fa afaka mampiditra io endri-javatra io ny Google Analytics. Ohatra, azonao atao ny miditra amin'ny tontolon'ny Google Analytics admin ary mahita sivana spam-fanavaozana. Eto amin'ity zoro ity dia azo atao ny mampihatra sivana manokana. Ity tontonana ity dia afaka mamela ny iray hampiditra sivana manokana izay ahafahanao mamorona sehatra geography. Ny fanivànana adiresy IP dia manampy amin'ny fanatsarana ny toeran'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny tranokala manontolo amin'ny fanaraha-maso .